Faahfaahin: Dagaal ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo | SAHAN ONLINE
Faahfaahin: Dagaal ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo
GAALKACYO – Wararka ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ciidanka Puntland ee ku sugan deegaanka Jeexdin oo 20km u jirta magaalada Gaalkacyo ay xalay habeenimadii ay weerar kusoo qaadeen maleeshiyaad hubeysan.
Wararka laga helayo ciidanka Puntland ee aagaas ayaa sheegaya in maleeshiyaadku ay ka yimaadeen dhanka Galmudug ,waxaana loo badinayaa in ay ahaayeen kuwa ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Ciidanka Puntland ayaa khasaaraha gaaray yihiin 5 askari oo dhaawac ah ,waxaana qaarkood la geeyey Isbitaalka Gaalkacyo.
Saaka subaxnimadii ayaa aagii lagu dagaalamay laga helay nin mayd ah ,waxaana dhexda uga xirnaa calanka madow ee Al-Shabaab leeyihiin iyo weliba unugta uu ka tirsan yahay magaceed.
Taliyaha ciidanka maamulka Galmudug Xasan Faarax ayaa sheegay in dad shacab ah oo Galmudug ah ay dileen ciidanka Puntland ,wuxuu Puntland ku eedeeyey in ay dad shacab ah maalin kasta disho,dilalkana ay sii-socon doonaan aakhirona la isugu tegi doono dilku sii-socon doono.
Goobta dagaalku ka dhacay ayaa ahayd halkii diyaaradaha Maraykanku ku duqeeyeen ciidamo ka tirsan Galmudug kuwaasoo ku dhawaaday saldhigga PSF ee garoonka diyaaradaha Gaalkacyo.
Maraykanka iyo Puntland ayaa ku eedeeyey ciidamadaas in ay wateen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Deegaanka Jeexdin ee dhaca Wadadda Wadaagsin ee Bariga Gaalkacyo ayaa isku xira saldhiga weyn ee ciidamada Puntland ku leeyihiin deegaanka Godad,waxaana maamulka Puntland ka hirgeliyey sanadkii 2015 ceel-biyood.
Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyey si wada jir ah uga kawada shaqeynayey amniga magaalada Gaalkacyo oo labada maamulba ku sugan yahay.